Soo dejisan Snapchat 9.15.1 – Vessoft
Soo dejisan Snapchat
Snapchat – software ah ee isgaarsiinta fudud iyo wadaagidda macluumaadka. Waxyaabaha ugu weyn ee software-ka waa awooda in la diro sawiro la waayin. Snapchat u saamaxaaya in ay qarka u saaran counter oo gayso la furitaanka of fariin ah oo tirtirtaa images ama videos ka dib markii muddo magacaaban. Software wuxuu kuu ogol yahay inaad la xiriirto qolalka chat, diri faylasha iyo wacaan video. Snapchat awood u waafajinta xiriirada ka buugga telefoonnada iyo sheekeysto iyaga.
Fariin iyo baaqyo video
Diritaanka ee photos gudhayaan
Nidaameed ee xiriirada ka qorin
Snapchat Software la xiriira: